Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android inay Samsung
Sidee si ay u gudbiyaan SMS, Apps, Media, wac abuse, Calendar iyo Xiriirada ka Android inay Samsung
Ugu dambeyntii, beddelaan telefoonka Android jir ah in a Samsung phone cusub, sida Samsung Galaxy S4 ama Fiiro 3? Si kastaba ha ahaatee, dhammaan faylasha sida aad xiriirka la leedahay, ayaa weli ku jira telefoonka jir Android. Qofku waa in uu ogaado hab si ay u gudbiyaan files ka telefoonka Android inay Samsung hore. Haddii taasi waxa weeye waxa aad laha, nasiib wanaag, aad ku sugan tahay meeshii saxda ahayd. Maqaalkani waxa uu doonayaa inuu aad la wadaagto Android si gaar ah loogu tala galay in Samsung software kala iibsiga - ka Wondershare MobileTrans .
Mid ka mid ah Click si ay u gudbiyaan Faylal ay ka Android inay Samsung
The software Android inay Samsung kala iibsiga awood aad si barnaamijyadooda, fariimaha qoraalka ah, sawiro, music, videos Guda wac, iyo xiriirada wareejiyo ka Android inay Samsung telefoonka ama kiniin fudayd.
Bedelka oo dhan xiriirada, xitaa ay ku jiraan kuwa ku jira xisaabaadka Google, Twitter, Facebook, iwm;
Copy info buuxa, sida cinwaanka guriga, cinwaanka email, jagada shaqada, magaca shirkadda iyo qaar kale;
Sidoo kale u guuraan barnaamijyadooda, jadwalka taariikhda, music, sawiro, videos, abuse call iyo fariimaha qoraalka ah ka Android inay Samsung;
La shaqee si fiican ay u guuraan xogta si Samsung ka Samsung, Motorola, HTC, LG, Sony iyo wixii la mid ah;
Noqda Wondershare MobileTrans u Mac marka la isticmaalayo computer Mac ah.
Quick oo ku haboon
No talaabooyin adag. Halkii, hal click, iyo dhammaan dadka ay khuseyso laga rari doono telefoonka ah Android inay Samsung. Ma noqon kartaa fudud.
Dhammaan Xiriirada beddelay
Software aad u saamaxaaya in ay u gudbiyaan labada xiriir ee kaadhka xusuusta telefoonka iyo xisaab, sida Google, Facebook, Twitter, si aad Samsung phone cusub.
Ma aha oo kaliya xiriirada, software ka caawisaa si ay u gudbiyaan barnaamijyadooda, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah, abuse wac, sawiro, muusig iyo cajallado fiidyow waqti.
Ma aha oo kaliya Samsung
Iyada oo software ah, waxaad si fudud nuqul karo xogta teleefon kasta Android, sida HTC, Sony, LG, Huawei, Motorola in aad telefoon Samsung. qalabka Android More taageeray >>
Demi Android inay Samsung
Nuqul iPhone in Samsung
Nokia Bedelka in Samsung
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Android inay Samsung
1. Waxyaabaha aad u baahan tahay: Your phone Samsung oo telefoon kale Android, laba USB fiilooyinka, computer Windows ah, ee Wondershare MobileTrans 2. About xiriirada in xisaab ah: Si aad u gudbiyaan xiriirada oo daruur, waxaa idinku waajib ah inaad gasho xisaabaadka ee telefoonka il Android ka hor wareejiyo. Haddii aadan, ma gasho xisaab meesha aad xiriirka la leedahay aadna ku badbaaddeen.
Tallaabada 1. Orod Transfer ee Software Android inay Samsung
Download Wondershare MobileTrans ee kombiyuutarka oo ku xidh. Waxa maamula. Marka ay suuqa kala hoose baxa, riix Start u dhaqaaqo.
Tallaabada 2. Isku Your Samsung Phone iyo Android Phone in Computer
Connect telefoonka Samsung oo telefoonka kale Android inay computer la fiilooyinka USB. Ka dib markii la ogaado, labada telefoonada muuqan ee MobileTrans uu furmo suuqa, sida shaashada Isbedelka on xaq.
Tallaabada 3. Transfer SMS, Calendar, Apps, Music, abuse Call, Video, Photos iyo Xiriirada ka Android inay Galaxy S3 / S4 / Fiiro 3/2 iyo More
Waxaa cad in si aad u phone Samsung awoodi karaa inuu wareejiyo xiriirada, jadwalka, barnaamijyadooda, music, SMS, videos, sawiro iyo Guda wac mid ka mid phone Android isku mar. Haddii taasi waxa weeye waxa aad rabto, riix Start Copy . Haddii aad go'aansato in aad nuqulka xiriir ka Android inay Samsung, waa in aad uncheck faylasha kale marka laga reebo xiriir iyo riix Start Copy .
Bedelka Nokia Xiriirada in Samsung
Demi ka Samsung si iPhone
Demi ka macruufka in Samsung
Faylal ay kala soo wareegeen BlackBerry in Samsung
Photos ka iPad dhaqaaq Samsung
Ku rakib / Update / uninstall Kies on Mac
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan SMS, Apps, Media, wac abuse, Calendar iyo Xiriirada ka Android